သူ့အတွက်ဆိုအဆင်သင့် – My Blog
အော် ငါ့အသက်အရွယ်က ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကျော်လို့ ဆယ့်ကိုးနှစ်တောင် ရောက်နေပြီပဲ… ကလေးလေး ဘဝနဲ့ ဖေဖေ မေမေ တို့ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ ခိုအောင်းပြီး အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့တာ ဖေဖေနဲ့ မေမေကလဲ ငါ့ကို ကလေးလေး တစ်ယောက်လိုပဲ အခုထိ ထင်နေတုန်းပဲ…ဖေနဲ့ မေရယ် သမီးကလေးမဟုတ်တော့ဘူး သမီးလေ လောကကြီးကို တစ်ယောက်ထဲ ပျံသန်းကြည့်ချင်နေပီ…. ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖူးပွင့်ဝေနဲ့ သင်ဇာအောင် လို ရည်းစားလေး ထားကြည့်ချင်လိုက်တာ…. တော်တော် ပျော်စရာ ကောင်းပြီး မခံစားဘူးတာတွေကို ခံစားရမှာပဲ…. အချစ်ရဲ့ အရသာကို ရင်ခုန်ကြည့်ချင်လိုက်တာ…. နက်ဖြန်ဆို ငါ့မွေးနေ့ ပဲ စောစောအိပ်မှ….. မနက်အစောကြီးထ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ …. မေမေ သမီး ဖူးပွင့်တို့ဆီ သွားလိုက်ဦးမယ်…. သူတို့ အဆောင်လဲရောက်ရော …. ဖူးပွင့် သင်ဇာ ညီးတို့ အိပ်ရာမထသေးဘူးလားဟ… ဒီနေ့ ငါ့မွေးနေ့ ရှော့ပင်း ထွက်ရအောင် လာခေါ်တာဟ…။
သူတို့လည်း ရေမိုးချိုး ဖီးလိမ်းပီး ….. ကဲ သွားစို့ … ဘယ်စင်တာကို သွားမှာလဲ… တော်ဝင်စင်တာလေ… ဒါဆို လိုင်းကားနဲ့သွားရအောင်… ဟာ ကားတွေကလဲ ကျပ်လိုက်တာ သူများတွေတောင် ဒီလိုစီးနေတာပဲ…. ဗဟုသုတပေါ့…. စပါယာမှ နောက်ထဲတိုးပါ ရှေ့ကကျပ်တယ်.. နောက်မှာ အာနိုး ဗန်ဒိန်း ကျော်ဟိန်း တို့ ရှိတယ်ဗျို့… စပယ်ယာ တိုးခိုင်းမှတော့ တိုးလိုက်ပေါ့ ဆုမြတ်ရယ်… အင်း ကားကလည်း ကျပ်လိုက် နောက်က အစ်ကိုကြီးက ငါ့ကျောကို သူ့ဗိုက်ကြီးနဲ့ ကပ်နေတာပဲ… ဟင်း… တဖြေးဖြေးနဲ့ သူ့ ဟိုဟာကြီးက ငါ့ ဖင်ကို လာထောက်နေတယ်… ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလဲ အားကို မကိုးရဘူး… ယောကျ်ားလေး ပစ္စည်းလဲ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး.. ခံစားမိ တာတော့ တင်းတင်း တောင့်တောင့်ကြီးပဲ… ။ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ကလည်း ကြာလိုက်တာ… ဒီနောက်က လူက လည်း မဆင်းသေးဘူး ဒုက္ခပါပဲ.. ဟင် ထားပါတော့လေ ကိုယ့် ဘာဖြစ်တာမှတ်… ဗဟုသုတပေါ့..။
ဟင် .. သူ့လက်က ငါ့ရင်ဘတ်ပေါ်တောင် မထိတထိ ဖြစ်လာပီ… တော်ဝင်စင်တာဆင်းမဲ့ အကိုအမတွေ ဒီမှာရောက်ပါပြီဗျာ…. ဆုမြတ်ရယ်ကားကလဲ ကျပ်လိုက် တာ … ဟုတ်တယ်.. ဆုမြတ် ဘာဝယ်မှာလဲဟ… အဝတ်အစားပေါ့… ဘယ်လိုဟာ ဝယ်ရမှန်းမသိပါဘူး… ကဲ ဝယ်စရာလေးတွေ လျှောက်ကြည့်ရအောင်… ဆုမြတ် နင့်အတွက် လန်းတာလေးတွေ မွေးနေ့ လက် ဆောင် ဝယ်ပေးမယ်… အေးပါ သင်ဇာနဲ့ ဖူးပွင့်ရယ်… နင်တို့ကို အားကိုးပါတယ်… စကတ်အတို အကျၤီလယ်ဟိုက် လိုးရှင်းလေး ဝယ်ပြီးပြီ…. ပြန်ကျရအောင်… ကား ငှားပြန်မယ်နော်… အိမ်ရောက်ပီ ကားပေါ် ပစ္စည်းတွေ ကျန်ခဲ့ဦးမယ်နော်.. ကဲကဲ ငါ့အခန်းထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနားယူရအောင်.. အခန်းထဲရောက်တော့ သင်ဇာက ‘’မနေ့ ညက ဒို့ ချစ်သူနဲ့ ခေါ်ပြီး အတူတူအိပ်တာလေ… ပန်းခြံမှာတွေ့ရတာ အားမရဘူးကွ… ထီးကွယ်ရတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မလွတ်လပ်ဘူး…။
မနေ့ညကတော့ ကောင်းလိုက်တာ ညနေစာစားပြီး စကားပြော ရေချိုးပြီး ည ၉နာရီကနေ ဒို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ စကြတာပဲ… အစက ဒီလို… ‘’ သူက တို့ရဲ ရင်သားမောက်မောက်လေးကို သာသာယာယာ လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်ပေးပြီး ပါးစပ်ကလဲ ကစ်ဆင်ဆွဲပေ့ါ… နောက်ပြီး သူ့လက်က ငါ့ရဲ့ ပစ္စည်းလေးထဲ ရောက်လာတယ်.. အဲဒီအချိန်မှာ ရင်တွေ အရမ်းခုန်ပြီး လောကကြီးကိုတောင် မေ့သွားတယ်… ဒါနဲ့ ရုတ်တရက် ငါ သူ့ကို ဖက် လိုက်တယ်.. သူက အပေါ်အင်္ကျီလေးကို သာသာယာချွတ် နောက်မှ စကတ်နဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီး နှစ်ယောက်သား ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်… ။ သူက ငါ့ပစ္စည်းလေးကို ပါးစပ်လေးနဲ့ လျှက်ပေးတာ ကောင်းလိုက်တာကွာ… ဒါနဲ့ သူ့ လီးကြီးကို ငါ့လက်ကလေးနဲ့ သာသာယာ ပြန်ပွတ်ပေးပြီး ငါ့ပါးစပ်လေးနဲ့ စုပ်ပေးနေမိတယ်… သူ့ လီးကြီးကို ငါ့ပစ္စည်းထဲ စပြီးထည့်တော့ နာတော့ နာတယ်… ဒါပေမဲ့ကွာ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းမရအောင် ကောင်းတာ…။
ဟိုဘက်ခန်းမှာလည်း ဖူးပွင့်တို့က ပွဲကြမ်းနေပီ… ငါတို့ နှစ်ယောက်ကလဲ အရှိန်ရလာတော့ တအားကို ချပစ်တာ..ပထမတာ့ မဝင်ဘူးထင်ပေမယ့် တကယ်ထည့်တော့လဲ ဝင်သွားတာပဲ… လွတ်လွတ် လပ်လပ်ချလိုက် နားလိုက်နဲ့ ည ၁နာရီမှာ လေးချီလောက် ပြီးသွားတယ်… ပြီးတော့ ရေချိုးပြီး သူပြန်သွား တယ်.. ‘’ ဆုမြတ် ‘’နင်ရော အဲ့ဒီလို မပျော်ချင်ဘူးလား… ‘’ ပျော်လည်း ပျော်ချင်တယ် ကြောက်တယ်ဟ.. ကားပေါ်မှာတုန်းက အကိုကြီးတစ်ယောက် အသားဖြူဖြူ ခပ်ချောချောပဲ ငါ့ဖင်ကို သူ့ဟာကြီးနဲ့ ထောက်ထားတာ… အဲ့ဒီအချိန်မှာ တုန်လှုပ်ခြင်းနဲ့ ရင်ခုန်ခြင်း နှစ်မျိုးခံစားမိတယ်… ‘’ နင်တို့ ခုနက မနေ့ည က အကြောင်းပြောတော့ ငါတောင်ရင်ခုန်လာတယ်…’’ ဒါဆို ဆုမြတ်… ‘’နင် ကားပေါ်မှာ နင့်ကို ထောက်ခဲ့တဲ့ လူကြီးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့…’’ စိတ်ဝင်စားတော့ကော သူ့လိပ်စာက ငါမသိဘူးဟ… ဒါဆို ငါတို့ ကူညီမယ်လေ… အိုကေလား…။
ဒါနဲ့ ဆုမြတ် နင့် မွေးနေ့ ဖူးပွင့်နဲ့ ငါ ဘာလက်ဆောင် ပေးရမလဲ… ငါ့ရဲ့ ဆန္ဒကတော့ တခြားဘာမှ မလိုချင်ဘူး… အဲ့ဒီအကိုကြီးရဲ့ လိပ်စာပဲ လိုချင်တယ်ကွာ.. အေးပါ သူငယ်ချင်းရာ ငါတို့ အစါမ်းကုန် ကြိုးစားပါ့မယ်… ကဲ ဒါဆို မင်းအိမ်ပြန်တော့လေ ညနေစောင်းပြီ နောက်မှ တွေ့မယ်နော်… အကြောင်းထူးရင် ဖုန်းဆက်မယ်နော်… ဘိုင်.. သူတို့ ကောင်းမှုကြောင့် ကိုကို့ အကြောင်းကို စုံစမ်းသိလိုက်ရပီ… ။ ကိုကိုနဲ့ အတူ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း လိုက်တက်ရအောင် ကြံရပါသည်.. ဆရာမ ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီမ … သင်တန်းအတူတူတက်မလို့ပါ… သူမသိတာလည်း ကျွန်တော် ရှင်းပြနိုင်အောင်လို့ တူတူလာတက်တာ… ဆိုပြီး ကိုကိုက သင်တန်းအပ်ပေးတယ်လေ… အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကိုကိုနဲ့ ဆုမြတ် သင်တန်းတူတူတက်ဖြစ်သွားပါရော… မသိတာတွေဆို ကိုကို့ ကို မေးတဲ့အခါ လက်ချင်းထိတာ တောင် တော်တော်ရင်ခုံရတာပဲ… ကိုယ်တို့ သင်တန်းတက်တာ ဒီနေ့ပါဆို ၃ ရက်ရှိသွားပီ… ညီမလေး ပျော်ရဲ့လား… ပျော်ပါတယ် အစ်ကို…။
အကို့ ကို ညီမ အကူအညီ တစ်ခုတောင်းချင်လို့.. ချစ်သူများနေ့ ကျရင် အကို့ ကို အိမ်အလည်ခေါ်မလို့… လိုက်မှာလားဟင်…အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူး… ဖေနဲ့ မေ ရိပ်သာ သွားကြမှာလေ.. အင်း ဆုမြတ်သဘော အကို လာခဲ့မယ်… ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄)ရက် မနက် စောစောကတည်းက ကိုကို့ ကို စောင့်နေမိတယ်… ဟေ့… ညီမလေး… ဟာ ကိုကို ကလည်း လန့်သွားတာပဲ… လာ မနက်စာ စားရအောင်… ကြိုက်တာ စား အများကြီး ပြင်ထားတယ်… ဆုလေးရယ်… ကျွေးတဲ့အစားအစာက လိင်ကိစ္စကို အားပေးတဲ့ အစားအစာ… ဟော ထိုင်နေတာက အောက်ခံမပါပဲ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ပေါ်နေတော့… ငါ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ… ကိုကို ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ… ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဆုရယ်… စားပြီးရင် သင်တန်းက စာတွေ ပြပေးနော်…အင်းပါ ဆုရယ်… စာတွေ ရှင်းပြရင်း… ရွှတ် ခနဲဆို ဆုက ကိုကို့ ပါးကို တချက်နမ်းပစ်လိုက်တယ်… အရမ်းချစ်မိလို့လေ.. ကိုကို စိတ်ဆိုးလား… ကို့ကို ချစ်လို့ နမ်းတာပါ…။
တကယ်လား ညီမရယ်… တကယ်ပေါ့ မယုံဘူးလား… ယုံပါတယ် ညီမလေးရယ်… ကို့ကို အရမ်းချစ်တယ်ကွာ… ပြွတ်… ညီမလေး နိုပလေး ကိုင်မယ်နော်… အင်း … ရင်သားလေးကလဲ နူးညံ့လိုက်တာ… ပြွတ်… အင်္ကျီချွတ်လိုက်မယ်နော်… အင်း…. တစ်ကိုယ်လုံး ဖွေးနေတာပဲ.. မျက်နှာလေးနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်တာပဲ.. ။ နှာတံလေးကလဲဆင်းလို့.. ညီမလေးရယ်… ပျော်ရဲ့လား.. ပျော်တာပေါ့ ကိုကိုရဲ့… စကတ်လေး ချွတ်လိုက်မယ်နော်… သဘောဟာ… ပေါင်တံလေးတွေကလဲ ဆင်စွယ်လေး ကျနေတာပဲ.. အမွေးတောင် ကောင်းကောင်း မပေါက်သေးဘူး.. ကိုကို လျှက်ပေးမယ်နော်.. ဟာာာ.. ဟင်းးး.. ကိုကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ… ဘယ်လိုများ လုပ်နေတာလဲ မသိဘူး… ညီမလေး ကိုကို ထိပ်လေး နည်းနည်း ထည့်ကြည့်မယ်နော်… အင်း….အင်းးး.. အားးးး…. အား… ကျွတ်စ် …. ညီမလေး ရရဲ့လား… ရပါတယ် ကိုကိုရယ်… အဆုံးထိ ထည့်လိုက်ပါ ရတယ်… အင့်…အာ့.. ကျွတ်စ်…။
ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်… ဘွတ်.. ဘွတ်.. ဗြောက်.. ဗြောက်.. ဗြောက်… ကိုကို အရမ်းကောင်းတာပဲ… ညီမ ကို အားမနာနဲ့…. လုပ်သာလုပ်ပါ.. … ညီမလေး .. လေးဘက်ထောက် ကုန်းလိုက်နော်… .. အင်းးးး…. ကောင်းလား ညီမလေး.. ဒါက တစ်မျိုးကောင်းတယ် ကိုကိုရယ်… အား…အား.. ကျွတ်စ် ကျွတ်စ် ကျွတ်စ်… ကိုကိုရယ်.. အရမ်းဆောင့်တာ ပဲ… ညီမလေး တအားကောင်းတယ်သိလား…. ကွဲရင် ကွဲသွားပလေ့စေ… လိုးနော်… ညီမလေး နောက်တစ်မျိုး ပက်လက်လှန်ပြီး ခြေထောက်တစ်ချောင်း ထောင်ပြီး လိုးမယ်နော်… ကို့သဘော… အင့်.. အင့်… လိုး… လိုးထဲ့… အား… အား… ဟူးးးး…ဟူးးးး…. ညီမလေး ပြီးပြီ… များများလေး ဆောင့်ပေး… အား…အား… ညီမလေး ကိုကို့ အရည်တွေ ညီမလေးေ-ာက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်မယ်နော် .. များများလေး ထည့်ပေးပါနော်… ကိုကိုနော်… ဒီနေ့ ၁၀ ချီလောက် လိုးပစ်မယ်… ညီမလေး ခံနိုင်ပါ့မလား… ကို့သဘော ကို့အတွက်ဆို အဆင်သင့် …။
ကြိုက်သလောက်သာ လိုးပါတော့ ကိုကိုရယ်… ညီမလေး အရမ်းချစ်တတ်နေပီ… ။ ကိုကို… ညီမလေးဆီ အပတ်တိုင်းလာပေးပါနော်… သေချောပေါက်ကို လာခဲ့မယ်.. စောင့်နေနော်.. အင်း … ဒီနေ့တော့ ကြီးဆေးစားပြီး တွယ်မှပဲ… ပြောရင်းဆိုရင်း နမ်းပစ်လိုက်တယ်… ပြွတ်စ်… ပြွတ်စ်.. အား…. ကိုကို လျှာနဲ့ လျှက်တာ ကောင်းလိုက်တာ… ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မခံစားဖူးဘူး… ဒါ ပထမဆုံးပဲ ကိုကိုရယ်… ညီမလေး ပီးရင် ကိုကို့ -ီးကိုလည်း မှုတ်ပေးဦးနော်… အင်းပါ ကိုကိုရဲ့… ဟာ ဒီနေ့ ကိုကို့ ဟာကြီး အကြီးကြီး ပါလား… ကြောက်စရာကြီး… ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သဘောကျတယ် .. ဟီး… ဒါဆို ကိုကို ထည့်ကြည့်မယ်လေ… ကြီးလား မကြီးလား သိရတာပေါ့… အင်း… အင်း… အာ့..အာ့.. ဖြေးဖြေး ကိုကို… ညီမလေး ေ-ာက်ဖုတ် ကွဲပြဲသွားလိမ့်မယ်… ကောင်းလည်းကောင်းတယ်… ဗွတ်… ဗြွတ်… ဗြောက်… ဗြောက်.. ဗြောက်… ဖြေးဖြေး မှန်မှန်လေး စောင့်ပေးနော်… ကိုကို… ဒါကြောင့် ကိုကို့ ကို အရမ်းချစ်တာ…။
ညီမလေး ကုန်းလိုက်မယ်… အို့… ကိုကိုရယ်… တိမ်တိုက်တွေထဲ ရောက်သွားသလိုပါပဲ… ခံလို့ ကောင်းလိုက်တာ… ညီမလေး ကိုကို မောပီ… ညီမလေး က အပေါ်ကနေ တက်လိုးပေးနော်… အင်း…ဟုတ် လိုးပေးမယ်… ကိုကို့ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရမယ်… အို့ အမေ့… ဒီလောက် အရည်တွေ ရွှဲနေတာတောင် စည်းကျပ်နေတာပဲ ကိုကိုရယ်… ဗြွတ်.. ဗြွတ်… ဗြွတ်… ကျွတ်စ်… ကျွတ်စ်… ကျွတ်စ်.. အား… အား.. အား… ကိုကို ညီမလေးနဲ့ တူတူ ပြီးရအောင်နော်…. အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်ပေး … ညီမလေး ကော့ထားတယ်…. အင်း… အား… အား… အားးးးးး… ပြီး သွားပြီ….. ကိုကို့ အပေါ်မှာ ဖက်ပြီး မှိန်းနေလိုက်မိတော့တယ်…. အော်… ဒီနေ့ဆို… ကိုကိုနဲ့ နေခဲ့တာ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ပြီပဲ… အထူးအဆန်းလေး ဖြစ်အောင် လုပ်မှပဲ… ဟီး…. ကိုကိုရယ်.. နောက်ကျလာချီလား…။
ခုချိန်ထိတောင် မရောက်သေးဘူး… ကလင်…. ကလင်… ကလင်… ဟင်… ဖုန်းလာပါလား… နံပါတ်ကလည်း အစိမ်းကြီး…. ဟဲလို… ညီမက.. ဆုမြတ်ပါလား… ကျွန်တော်က ရဲစခန်းကပါ… ဇော်ဇော်ကို မူးယစ်ဆေးသုံးပြီး မိန်းမပျိုတွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့အမှုနဲ့ အခု ဖမ်းထားပါတယ်…. အခု သူက ဖုန်းဆက်ခိုင်းလို့ပါ…. ဟာ …….. ကိုကိုရယ်… ရက်စက်လိုက်တာ… ညီမကို ညာတယ်… ခုတော့ တစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့တော့မှာပေါ့… ကိုကိုနဲ့ ဝေးရင် ညီမ ဘယ်လိုနေရပါ့မလဲ…. ကိုကို မလာမချင်း ဟောဒီ ကားမှတ်တိုင် ကနေပဲ စောင့်နေမယ်…. အော် …. နှင်းတွေ ကလဲ ဒီနေ့မှ ထူးထူးခြားခြား ကျလိုက်တာ… ကိုကိုရယ် ညီမကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ လာကြည့်ပါဦး…. ကိုကိုရဲ့….. အီး.. မြူနှင်းတွေကြားက ငိုရှိုက်သံလေးကို နားထောင်ကြည့်လှည့်ပါလား ကိုကိုရယ်…. ပြီးပါပြီ။
ေအာ္ ငါ့အသက္အရြယ္က ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ ဆယ့္ကိုးႏွစ္ေတာင္ ေရာက္ေနၿပီပဲ… ကေလးေလး ဘဝနဲ႔ ေဖေဖ ေမေမ တို႔ရဲ့ ရင္ခြင္ထဲမွာပဲ ခိုေအာင္းၿပီး ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့တာ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမကလဲ ငါ့ကို ကေလးေလး တစ္ေယာက္လိုပဲ အခုထိ ထင္ေနတုန္းပဲ…ေဖနဲ႔ ေမရယ္ သမီးကေလးမဟုတ္ေတာ့ဘူး သမီးေလ ေလာကႀကီးကို တစ္ေယာက္ထဲ ပ်ံသန္းၾကည့္ခ်င္ေနပီ…. ငါ့ရဲ့ သူငယ္ခ်င္း ဖူးပြင့္ေဝနဲ႔ သင္ဇာေအာင္ လို ရည္းစားေလး ထားၾကည့္ခ်င္လိုက္တာ…. ေတာ္ေတာ္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းၿပီး မခံစားဘူးတာေတြကို ခံစားရမွာပဲ…. အခ်စ္ရဲ့ အရသာကို ရင္ခုန္ၾကည့္ခ်င္လိုက္တာ…. နက္ျဖန္ဆို ငါ့ေမြးေန႔ ပဲ ေစာေစာအိပ္မွ….. မနက္အေစာႀကီးထ ေရမိုးခ်ိဳးၿပီးေတာ့ …. ေမေမ သမီး ဖူးပြင့္တို႔ဆီ သြားလိုက္ဦးမယ္…. သူတို႔ အေဆာင္လဲေရာက္ေရာ …. ဖူးပြင့္ သင္ဇာ ညီးတို႔ အိပ္ရာမထေသးဘူးလားဟ… ဒီေန႔ ငါ့ေမြးေန႔ ေရွာ့ပင္း ထြက္ရေအာင္ လာေခၚတာဟ…။
Categorized as အင်းဆက် Tagged သူ့အတွက်ဆိုအဆင်သင့်